Programmer Diaries: ကျွှန်တော်တို့စပြီ
ဒီကနေ့ကစပြီး မြန်မာပြည်က ရုံးမှာစပြီး အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေတုန်းကတော့ ပြင်ဆင်ဆဲ ဖြစ်သည်။ ဂျပန်က ဥက္ကဋ္ဌကလည်း ဒီမှာလာနေပေးပါသည်။ သူရှိတုန်းသူ့ဆီက Management နဲ့ ပတ်သက်သော
အကြောင်းအရာများကို လေ့လာရပါမည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူလည်း ဂျပန်ပြည်မှာ Developer လုပ်နေရာက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ကျွှန်တော့်မှာမရှိသော ပညာများ သူ့ဆီမှာရှိပါသည်။ ကျွှန်တော်တို့ ရုံးကို လူ ၃ယောက်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီနေ့ပဲ ကျွှန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပရိုဂျက်ကို စပြီးစတင်ပါသည်။ အားလုံးပူးပေါင်း၍စပြီးရေးပါမည်။ ကျွှန်တော်က ဂိုက်လိုင်းသာချပေးသည်။ကျန်တာတွေကို သူတို့ကိုတွေးပြီး သူတို့ကို ရေးတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးပါမည်။ MySQL, JPA, WebService, JSF, Android နဲ့ ရေးပါမည်။
ကျွှန်တော့် ဆရာက သူလည်းမနေနိုင်ပါ။ C# နဲ့ သူလည်း ရေးမည် လုပ်သည်။ ကျွှန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဒီပရိုဂျက်တစ်ခုနဲ့စတင်ပေါင်းစည်း မိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ တဘက် ကျွှန်တော်တို့ အိမ်နားမှာလည်း စနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ သင်တန်းတစ်ခုကို စတင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကွန်ပျူတာကို တစ်ကယ် မြတ်နိုးသူများကို ပြုစုပျိုးထောင်သွားရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
အဆင့် ၃ဆင့် ဖြင့် သင်ကြားသွားမည်။
ကွန်ပျူတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆင်နိုင်တဲ့အထိ တတ်ရမည်
နစ်သက်ရာ OS ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် Install လုပ်နိုင်ရမည်
ကိုယ့် Computer ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် Customize လုပ်ပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အနေအထားရောက်အောင် Performance Tuning လုပ်နိုင်ရမည်
ပရိုဂရမ်မင်း ဘာသာရပ်အနေဖြင့် C, C++, Java, Python ကို သင်ကြားပြီး Language Free Developer များအဖြစ် လေ့ကျင့်ပေးမည်
Desktop Application များအနေဖြင့် C#, Java Swing, Java FX ကို သုံးပြီး သင်ကြားပေးမည်
Windows Bat ပရိုဂရမ်များအား စိတ်ကြိုက်ရေးနိုင်သည် အထိ သင်ကြားပေးမည်
Networking အကြောင်းကို သင်ကြားပေးမည်
ကိုယ်ပိုင် Network တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်သည် အထိသင်ကြားပေးမည်
TCP/IP အား အသုံးပြု၍ Low Level အထိ Design ရေးနိုင်သည် အထိ သင်ကြားမည်
Ajax Lib များအား အသုံးပြုနိုင်အောင် သင်ကြားမည်
Web Design အား Layout, Coloring နှင့် Template များအား ကိုယ်တိုင်ရေးသားနိုင်သည် အထိသင်ကြားပေးမည်
Java EE ၏ အခြေခံများဖြစ်သော Servlet, JSP, JSF, EJB, JPA, Webservice များကို နားလည် ပိုင်နိုင်အောင် သင်ကြားမည်
Django Framework အား အသုံးပြု၍ Web Application ရေးသားပုံအား သင်ကြားမည်
Microsoft .Net အား အသုံးပြု၍ Web Application ရေးသားပုံအား သင်ကြားမည်
Comet နှင့် WebSocket အား အသုံးပြု၍ Ajax ၏ နောက်ပိုင်း ပညာများအား သင်ကြားမည်
Cloud Service များဖြစ်ကြသော GAE, Cloudbees, Openshift အား အသုံးပြု၍ မိမိ၏ Web Application များအား Cloud ပေါ်တွင် Deploy လုပ်နိုင်အောင် သင်ကြားမည်
Subversion နှင့် Git တို့အား အသုံးပြု၍ အုပ်စုလိုက် Develop လုပ်နိုင်အောင် သင်ကြားမည်
Cassidy February 2, 2013 at 1:21 AM
I wanna attend your Web Course. Can you tell me when your course will open? I hope your class will open in Holiday.
Khun lay February 13, 2013 at 8:18 PM
yeah me too, i also want to attend in your open source training
and i cann't wait.can i know dtc's full address and phone no ;
and we are waiting for your reply ;